Maitiro ekutanga zvekare iyo Apple Watch kana isiri kupindura | Ndinobva mac
Maitiro ekutanga zvekare Apple Watch kana isiri kupindura
Iyo Apple Watch inochengetedzwa nehurongwa hwekushandisa uye, senge chero chimwe chigadzirwa chemagetsi, dzimwe nguva inogona kuratidza kushanda kusinganzwisisike kana kumira chaiko kupindura kusangana kwevashandisi. Mune zviitiko izvi, zvakanakira dzima chishandiso chedu kana kutangazve icho.
Iyo Apple Watch haina bhatani remagetsi sekunge tinogona kuiwana pane iyo iPhone, iPad kana Mac pasina kuenda kumberi, saka maitiro ekutanga kana kudzima Apple Watch yedu painomira kushanda yakanyanya kuomarara kana tisingadaro. ziva sei kuzviita. Heano matanho ekutevera tangazve iyo Apple Watch.
Kana mudziyo wedu uchishanda zvisirizvo, zvinotora nguva yakareba kuvhura mashandisirwo uye kana zvikadaro, zvinoshanda zvishoma zvishoma, tinogona kudzima Apple Watch nekukanya bhatani repadivi nekurichengeta rakadzvanywa kudzamara meseji yaratidzwa pachiratidziri. Bvisa mudziyo.
Asi kana isiri yedu kifaa yamira kupindura kubata, hatizokwanise kuwana menyu iyo inotibvumidza kudzima chishandiso, saka tinomanikidzwa kuitazve. Kuti utangezve iyo Apple Watch kana iyo skrini isingapindure, isu tinofanirwa kuita anotevera matanho:
Dhinda uye ubatisise Apple Tarisa yedhijitari korona bhatani.
Pasina kusunungura, tinya uye bata iyo padivi bhatani reApple Watch.
Iye zvino isu tinongofanirwa kumirira ingaite masekondi gumi kusvika iyo Apple Watch skrini inotiratidza iyo Apple logo. Panguva iyoyo, tinogona kusunungura mabhatani maviri.
Kugadziridzwa kuApple Watch, pazviitiko zvakawanda zvinowanzosvika kuora mwoyo mushandisi uye ipa pfungwa yekuti mudziyo wamira kushanda. Hatifanire kumisikidza mudziyo wedu kana iyo Apple Watch ichitangazve, nekuti inogona kuunza kukuvara kune software inotimanikidza kuenda kuApple Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekutanga zvekare Apple Watch kana isiri kupindura
Huru nyowani yekuvandudza kuLogic Pro yeMac
Yakawedzerwa kumazambiringa uye yapera 2013 uye 2014 MacBook Air uye Pro